Business Directory and Business Network
Isingeniso - Business Networking
Inqubo for a Ad Free
Izindaba & Insights
FAQ - Business Network
Kuleli zwe exhunyiwe ngokugcwele futhi wonke omhlaba, yimuphi isinyathelo kufanele afune ukubambisana Phakathi engaba convergence Injongo, imibono kanye nezimiso zokuziphatha ezithuthukisa, ngokungeza, imiphumela oyifunayo. Esimweni sethu, othintekayo bafune abalingani ukwakha izwe elingcono, zokunciphisa ukungalingani kanye nokuqinisa imvelo kwezomnotho osomabhizinisi amancane naphakathi nendawo abaphethe phezu 50% ingabe emprego global.
sibambisane, izikhungo ukuthi IEAGE kusekela, izikhungo ukuthi ukusekela IEAGE, Abangane kanye nabo ebhizinisini:
IEAGE eyilungu leKomiti Campinas Regional. Sao Paulo, Brazil
I-Global Entrepreneurship Network (RGE) It is a platform, unyaka wonke, izinhlelo nezinyathelo ukwakha ibhizinisi ecosystem global. GEN kusiza abantu 160 amazwe ukuba yilo imibono yabo ibe ethembisa yokuqala nokuqhuba amabhizinisi amasha kwamathuba emisebenzi, ukuphuthumisa emisha kanye ukuthuthukisa nokusimama kwezomnotho emhlabeni wonke.
I-Global Entrepreneurship Network (GEN) is a unyaka wonke inkundla izinhlelo nezinyathelo okuhloswe ngawo ukudala eyodwa yesimiso semvelo ebhizinisi global. GEN kusiza abantu 160 amazwe yilo imibono yabo ibe kulingwa ukudala entsha othembisayo imisebenzi, kuyashesha emisha nokuqinisa ukunzinza kwezomnotho emhlabeni wonke.
"sisekela, kusukela 2009, Shai Reshef, UMongameli kanye Umsunguli UoPeople, ekuthatheni isinyathelo oluvelele futhi sidinga ukusakaza izwi, namazwe omhlaba. Sikholelwa ukuthi imfundo kuyinsika eliyisisekelo ukwenza kwenzeke ukuthi ube nokuphila okungcono futhi inciphe kuqedwe ukungalingani okukhona." Mario Luis Tavares Ferreira - UMongameli IEAGE
University of the People (University of the People) non-profit wezwe wokuqala, yesikole- khulula, egunyaziwe enyuvesi online anikezelwe ekuvuleni amasango imfundo ephakeme bonke abantu ayenele ngenye.
Umbono we-University of the People
I-University of the People (University of the People) ukholelwa ukuthi kufinyeleleka emfundvweni lephakeme mbewu key ekugqugquzeleni ukuthula kwezwe kanye nokuthuthukiswa komnotho wembulunga yonke. Ubheka imfundo ephakeme ilungelo eliyisisekelo, futhi ukholelwa ukuthi kungaba kokubili nokuguqula izimpilo zabantu ngabanye futhi kube ngebutho ebalulekile for change nomphakathi. UoPeople ukholelwa ukuthi imfundo kudlala indima eliyisisekelo ekuqiniseni ukuhlonishwa kwamalungelo abantu nengqalasizinda yenkululeko, nokugqugquzela ukuqonda nokubekezela.
Nucleus Junior Enterprises Unicamp
Umnyombo Unicamp Junior Izinkampani iyinhlangano engenzi nzuzo ukuthi umele isekela Companies Junior (HHAYI) State University of Campinas. I-Centre sifuna ukuqinisa Junior Enterprise Movement (MEJ) Unicamp ngu EJs ekuthuthukiseni, ukuqeqeshwa osomabhizinisi junior nokuhlanganiswa phakathi MEJ Unicamp futhi emakethe ukuze ukusungula amathuba ebhizinisi kanye nokubambisana. Ngaphezu kwalokho, Centre kuyinto ibhizinisi labo emphakathini kanye ahlobene izinhlangano kuya Junior Enterprise Movement.
← Inqubo for a Ad Free
Ngena ngemvume →
Fernando Lopes Travel and Tourism Agency
WORLD Smoke - e-CIG ukuthenga sizikhandle inthanethi
Globetrotter Travel Agency
Observation: Ukuze anikeze ulwazi, ngokushesha futhi omhlaba, ngaphezu 15 izilimi, usebenzisa inqubo translation othomathikhi. Khona, abanye imishwana kungenzeka kube translation ephelele.
· © 2017 IEAGE - Institute · Inikezwe amandla yi · Designed with the Customizr theme ·